Yiloo nto UGqirha ayaleleyo? | Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 24, 2005 NgoMgqibelo, Oktobha 18, 2014 Douglas Karr
Kule mpelaveki iphelileyo, bendineshishini elihle / uhambo lwam ukuya eVictoria naseVancouver, eBritish Columbia. Ndithweswe isidanga kwisikolo samabanga aphakamileyo eVancouver kwiminyaka engama-20 eyadlulayo kwaye ndibuyile kabini kuphela. Yisixeko esimangalisayo - sicocekile, sihle, sanamhlanje kwaye sisempilweni. Ndichithe ixesha elithile nomhlobo wam osenyongweni ovela kwisikolo samabanga aphakamileyo saze sanemingxunya yegalufa eli-9. (Kwaye ishishini lihambe kakuhle, nayo!)
Ndabona izinto ezimbalwa ngelixa ndandiphezulu. Enye yayikukunqongophala kwabantu abatyebe ngokugqithiseleyo. Ukumangalisa njengoko kubonakala ngathi, babembalwa kuphela (ndandingomnye wabo). Ndicinga ukuba kukho imeko-bume engcono elunge kwezempilo eVancouver. Ukuhamba kuyinto eqhelekileyo kuba kukho iivenkile kunye neevenkile ezikufutshane namakhaya. Sichithe ubusuku edolophini ngoMgqibelo kwaye sahamba sivela kwenye indawo sisiya kwenye (bendidiniwe nangona kunjalo, ndiye ndafumana iteksi amatyeli aliqela!)
Enye into endiyiqapheleyo yayiyimpembelelo yokhathalelo lwempilo kubuzwe kumashishini amancinci nakushishino. Akukho loyiko lokushiya umsebenzi wakho ukuze uqale ishishini lakho apho. Yinto ehambelana nam njengoTata omnye. Nangona ndingenguye ummeli we-bureaucracy yamayeza esizwe kunye nazo zonke izinto ezingasebenziyo ezichaphazelekayo, ndiyakholelwa ukuba kunokubakho ulonwabo oluphakathi.
Ndingathanda ukubona impembelelo yokurhweba kunye nokukhula kwamashishini amancinci ukuba yinxalenye yencoko eMelika. Mhlawumbi singafumana indawo yolonwabo, apho urhulumente encedisa kukhathalelo lwempilo lwamashishini amancinci kunyaka wokuqala. Kwaye ngokuqinisekileyo kufuneka sijongane ne-inshurensi 'yokugcuma' okwenzeka kwishishini ukuya kwishishini, kunye nomntu ngamnye.
Impilo entle kufuneka ivuzwe ngezahlulo eziphantsi, njengokuqhuba ngokulungileyo kwi-inshurensi yemoto. Mhlawumbi umaleko 'woKhuseleko lwezeMpilo' unokongezwa kwiindleko zethu zangoku zeinshurensi ezingasigubungela ngamaxesha engqesho okanye kwizigaba zokuqala zamashishini amancinci.
Andikabi ngummeli wamayeza esizwe. Ndiyakholelwa ukuba ufuna ukubona naliphi na ishishini liqhutywa kakubi, mnike urhulumente ukuba awenze! Kodwa inkululeko kuloyiko lokuphulukana nezibonelelo ithintela umoya wokurhweba apha eUnited States.
Iifayile kufuneka zikhululeke ukuqala ishishini elincinci ngaphandle koloyiko lokulahlekelwa yinshurensi yabo yonyango!
tags: Ukhathalelo lwempilo lwaseKhanadai-inshorensi yempiloukhathalelo lwempiloumhlawuli omnye
Ngomhla wama-26 ku-Disemba 2007 ngo-10: 40 AM
Ewe ndibona ezi mpendulo kumbuzo wam wangaphambili komnye umtya.
Ndingum-100% ngokuchasene norhulumente obaleka nantoni na…
Kukho isizathu sokuba abantu baseCanada baqhube ezantsi ngononophelo lwempilo.
Ndikunye nawe kuRhulumente… ukuba ufuna ukufaka ishishini emhlabeni, yibeke phantsi kolawulo lukaRhulumente. Oko kwathethi, ukhathalelo lwempilo kwindalo iphela AKUFUNI kuqhutywa yi-100% ngurhulumente, nangona kunjalo, njengaseCanada.
Ndiyakholelwa ukuba inokubanjiswa ngasese kwaye ibe kwindalo iphela. Ukuba umntu ufuna ukuhlawula epokothweni (njengabantu baseKhanada abeza eMzantsi), kutheni ungamvumeli?